ကွယ်လွန်သွားတဲ့ မိခင်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကို ၀မ်းနည်းကြေကွဲစွာလိုက်ပို့ခဲ့တဲ့ MRTV-4 မင်းသမီး ဈူးဈူးဈာန် – Cele Snap
ကွယ်လွန်သွားတဲ့ မိခင်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကို ၀မ်းနည်းကြေကွဲစွာလိုက်ပို့ခဲ့တဲ့ MRTV-4 မင်းသမီး ဈူးဈူးဈာန်
ပရိသတ်ကြီးရေဈူးဈူးဈာန်ကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေစတင်ခေတ်စားခဲ့တဲ့အချိန်ကတည်းက ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာပါဝဝင်ခဲ့သူပါ။ နောက်ပိုင်း ပရ်သတ်တွေအားပေးချစ်ခင်မှုကိူအပြည့်အဝရရှိထား တာပါ။
မနေ့ကဒီဇင်ဘာလ၉ရက်နေ့မှာ သူမရဲ့မိခင်ဟာ ဆုံးပါးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ မိခင်ကြီးရဲ့နာရေးသတင်းကိုဝမ်းနည်းစွာပြောပြခဲ့တာပါ။ ဒီနေ့မှာတော့မိခင်ကြီးရဲ့ နာရေးခရီးကိုလိုက်ပို့ရင်း”ဟိုးငယ်ငယ်လေးတည်းက Broken Family ကနေ သားအမိလေးနှစ်ယောက် ဘဝကိုခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားပြီး ရုန်းကန်ရှင်သန်လာခဲ့တာ …အခုတော့မေမေဈူးကိုစိတ်ချသွားပီပေါ့နော် …. မေမေကောင်းရာမွန်ရာမှာ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အနားယူနေမယ်ဆိုတာဈူး ယုံတယ်နော်…ဈူးကိုစိတ်ချနော်..အေးချမ်းပါစေမေမေ 🙏🙏🙏”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ဝမ်းနည်းစွာပြောလာတာပါ။
Broken Familyအဖြစ်သားအမိနှစ်ယောက်ထဲ ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ ဈူးဈူးဈာန်ကတော့ အခုဆိူတိုင်ပင်ဖော်တိုင်ပင်ဖက်မိခင်ကြီးဆုံးပါးသွားလို့ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်ကတော့ တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာပါပဲနော်။ပရိသတ်တွေလည်း ဈူးဈူးဈာန်အတွက်အားပေး စကားပြောခဲ့ပါဦးနော်။
ပရိသတျကွီးရဈေူးဈူးဈာနျကတော့ ဇာတျလမျးတှဲတှစေတငျခတျေစားခဲ့တဲ့အခြိနျကတညျးက ဇာတျလမျးတှဲတှမှောပါဝဝငျခဲ့သူပါ။ နောကျပိုငျး ပရျသတျတှအေားပေးခဈြခငျမှုကိူအပွညျ့အဝရရှိထား တာပါ။
မနကေ့ဒီဇငျဘာလ၉ရကျနမှေ့ာ သူမရဲ့မိခငျဟာ ဆုံးပါးသှားခဲ့တာဖွဈပွီး သူမရဲ့ မိခငျကွီးရဲ့နာရေးသတငျးကိုဝမျးနညျးစှာပွောပွခဲ့တာပါ။ ဒီနမှေ့ာတော့မိခငျကွီးရဲ့ နာရေးခရီးကိုလိုကျပို့ရငျး”ဟိုးငယျငယျလေးတညျးက Broken Family ကနေ သားအမိလေးနှဈယောကျ ဘဝကိုခကျခကျခဲခဲကွိုးစားပွီး ရုနျးကနျရှငျသနျလာခဲ့တာ …အခုတော့မမေစြေူးကိုစိတျခသြှားပီပေါ့နျော …. မမေကေောငျးရာမှနျရာမှာ အေးအေးခမျြးခမျြးနဲ့အနားယူနမေယျဆိုတာစြူး ယုံတယျနျော…စြူးကိုစိတျခနြျော..အေးခမျြးပါစမေမေေ 🙏🙏🙏”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ဝမျးနညျးစှာပွောလာတာပါ။
Broken Familyအဖွဈသားအမိနှဈယောကျထဲ ရုနျးကနျခဲ့ရတဲ့ စြူးစြူးစြာနျကတော့ အခုဆိူတိုငျပငျဖျောတိုငျပငျဖကျမိခငျကွီးဆုံးပါးသှားလို့ခံစားရတဲ့ ခံစားခကျြကတော့ တကယျကိုဝမျးနညျးစရာပါပဲနျော။ပရိသတျတှလေညျး စြူးစြူးစြာနျအတှကျအားပေး စကားပွောခဲ့ပါဦးနျော။
မိသားစုအားလုံးကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး (၆)လအကြာမှာ သူမရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကို ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ ခွန်းဆင့်နေခြည်
အနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက် ပရိတ်သတ်တွေ သူ့ကို သတိထားမိဆုံးကာရိုက်တာတစ်ခုကိုပြောပြလာတဲ့ ဦးပေါ်လေး